SomaliTalk.com » 2010 » January
Home » Archive Bisha January, 2010
Xaalad nolol xumo oo ka taagan magalada Dhusamareeb iyo Hey’adda SSWC oo soo jeedisay in gar gaar lala soo gaaro dadkaasi
Dadkaan ayaa ah kuwii dhawaan ka barakacay magaalada dhusamareeb ayaa xiligaan waxa soo wajahay xalad nolol xomo tii ugu darneed, waxayna sheegtay in loo baahan yahay in dadkaasi ay helaan gar gaar Bini’aadanimo. Halkan ka daawo sawiro muujinaya dhibaatada haysata shacabka Waxa ay ku nool yihin dadkaasi duleedka magalada xarunta u ah gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb kuwaas oo ay fara ba’an...
“DFKMG waxay noqotey aalad uu cadowgu u adeegsado baabi’inta jiritaanka Soomaaliya iyo boobista kheyraadka dalkeeda..” Warsaxaafadeed
“Ahmed Walad Cabdalla waa isku dubaridaha qorshooyinka cadowtooyo ee lagu baabi’inayo Soomaaliya isaga oo hadda gacanta kula jira dagaal weyn oo….” Golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye oo Sabtidii kulan ku yeeshay gudaha Magalada Muqdiso ayaa war murtiyeed ka soo saray, Wuxuuna xanbarsanaa qodobo kala duwan oo isugu jirey baaqyo ,hogo tusaaleyn iyo ogeysiin waxaana nasoo...
Wasiirka dhaqancelinta iyo daryeelka Naafada DFKMG: Gudoomiyaha Baarlamaanka wax sharci kuma fadhiyo xilka uu hayo…
Wasiirka dhaqancelinta iyo daryeelka Naafada DFKMG Dr. Maxamed Cali Ibraahin oo Somalitalk wareysi gaar ah siiyey ayaa ka hadley khilaafka Baarlamaanka, sababaha wax qabad la’aanta Dowlada, dhibaatooyinka ay keeneen dhaqaalo la’aanta, tirada golaha Wasiirada iyo arimo kale oo fara badan, isagoo arimahaasi iyo kuwo kale ka hadlaya wuxuu yiri “Gudoomiyaha Baarlamaanka wax sharci kuma...
Banaanbaxyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo Jimcadii ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Banaanbax looga soo horjeedo xariga Sheikh Abdullah al Faisal oo ay dowladda Kenya xirtay December 31, 2009 xilli uu ka soo baxayay masjid Jamia ee ku yaala Bartamaha Kenya ayaa ka dhacay Jimca January 15, 2010 magaaladda Nairobi kadib Salaadihii Jimcaha. Banaanbaxan oo isku badalay mid rabshadeed ayay kadiba police-da dalka iyo dadkii banaanbaxa sameenaya isku dhaceen iyadoo la xaqiijiyay dhimashada...
Shaqo banaan (New Vacancies)
Noor al bayan tahfiid quran kareem wuxuu doonayaa macalimiin rag iyo dumar isugu jira oo dhigi kara quraanka kareemka ah subax iyo galab labadaba. Waxaan doonaynaa macalimiin khibrad fiican u leh dhigista iyo barida quraanka kareemka laguna aamini karo quraanka kareemka ah. Maadooyinka in ay dhigaan la rabo waa sida tan:- Quran / Tajwiid Corista iyo akhriska luuqada Carabiga Ardeyda wax ka dhignaysa...